Mid kamid ah Saraakiisha Xukuumadda Iiraan oo ku jees jeesay Saxaabiga Xasan bin Cali Radiyallhu Canhum. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Feb 13, 2016 272 0
Madaxa ciidamada gurmadka Iiraan ee magacooda loo soo gaabiyo “Baasiij” Muxamed Ridaa ayaa shir jaraa’id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in asyan dib dambe ugu noqon doonin khaladkii uu ku dhacay Xasan bin Cali markii uu la heshiiyey Saxaabiga Mucaawiya bin Abii Sufyaan, waa sida uu hadalka u dhigaye Raafidigani.
Wuxu sheegay in arinkaas ay Cali u geysay taag dari iyo Caqli xumo, islamarkaana iyagu aysan la heshiin doonin cadowgooda gobolka ku sugan, islamarkaana ay sii wadi doonaan dagaalkooda ka dhanka ah dadka Muslimiinta oo uu isagu ugu yeerey Argagaxisada.
Muxamed Ridaa oo kalimaadkiisa oo dhan ahaa kuwa jees jees ah ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in dadkii la noolaa Xasan bin Cali ay ka kheyr badan yihiin kuwa maanta nool ee Rawaafida ah, islamarkaana dagaallada kawada dalalka Suuriya, Yaman, Ciraaq iyo Lubnaan.
Heshiiskii dhacay sanadkii 40 Hijriyada ee dhexmaray Saxaabiga Xasan bin Cali iyo Mucaawiya bin Afii Sufyaan ayuu ninkani ku tilmaamay inuu ahaa mid ceeb ah, islamarkaana liidnaa, sida uu hadalka u dhigay, isagoona ku hanjabay in awooda uu leeyahay madaxa Ugu sareeya Iiraan ninka lagu magacaabo Khumeyni ay ka badantahay tii uu heystay Saxaabiga Zasan Bin Cali Allah kawada raali noqde’e.
Si kastaba ha ahaatee Rawaafida ayaa caan ku ah cayda iyo suurad xumeynta Saxaabada Rasuulka Scw, waxaana ay iska dhigaan iney jecel yihiin Aalu-Baytka Rasuulka basle Culimada Islaamka ayaa sheegaya in warkaasu aanu waxba ka jirin, waxaana taas caksigeeda sugtey Taariikhda iyo Caqiidada ay aaminsan yihiin Rawaafida.